Passport ပုံတွေ ကို Actions ဖိုင်လေးတွေall in one လုပ်ထားကြမယ် - သန်လျင်သားနည်းပညာ
Home / Unlabelled / Passport ပုံတွေ ကို Actions ဖိုင်လေးတွေall in one လုပ်ထားကြမယ်
Passport ပုံတွေ ကို Actions ဖိုင်လေးတွေall in one လုပ်ထားကြမယ်
by သန်လျင်သားနည်းပညာ on 03:36:00
မင်္ဂလာပါ နည်းပညာအမျိုးတွေ ၂ ရက်တိတိလုပ်ခဲ့တဲ့ Passport ပုံတွေ ကို Actions ဖိုင်လေးတွေall in on လုပ်ထားပါတယ်၊ ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်လဲပါတယ်၊ မြန်မာပြည်ကလူတွေအတွက်လဲပါတယ်...
ဆိုဒ်တွေကတော့ ဆိုင်သမားတွေသုံးနေတဲ့ ဆိုဒ်အကုန်ပါတယ်၊မြန်မာပြည်ကလူတွေကတော့ ကာလာ အပုံ အဖြူအမဲ အပုံ နှစ်မျိုးလုပ်ပေးထားတယ်၊ ပုံထုပ်စက္ကူတွေလဲ A4 . LEGAL. 4X6 အဆင်လုံးဝပြေအောင်လုပ်ထားပါတယ်၊ ပြတ်သနာတွေကင်းအောင်လဲ
လုပ်ပေးထားတယ်၊ ဝယ်ယူမယ့်သူတွေ အတွက်ဖိုင်တွေ အသုံးပြုနည်း
တန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖူးတဲ့ ဆရာတွေသိမှာပါ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်အောင်လို့လဲ စေတနာသန့်သန့် လုပ်နည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.....
မြန်မာပြည် CB ဘဏ်
ထိုင်း ကပ်စီကွန်ဘဏ် တွေမှငွေသွင်းနိုင်ပါတယ်....
ငွေသွင်းစာရွက်ပြပြီးတာနဲ့ fb ချက်ဘောက် gmail တွေမှ ပို့ပေးပါ့မယ်...
မိတ်ဆွေဝယ်ဖို့ ဒီမှာ နိုပ်ပါ